Ushaye ngamafishane uZwane ebuzwa ngoHunt - Impempe
Ushaye ngamafishane uZwane ebuzwa ngoHunt
June 7, 2021 June 7, 2021 Impempe.com
UDillon SHepard no-Arthur Zwane
Uvele washaya ngezinqamulelayo, washo obekufanele akusho umqeqeshi weKaizer Chiefs obambile, u-Arthur Zwane uma ebuzwa ngoGavin Hunt osanda kuxoshwa.
UZwane nguye onikwe ithuba lokuba aqedele imidlalo emibili yeligi ebisele ngokubambisana noDillon Shepard kulandela ukuxoshwa isigubhukane kukaHunt.
Bayiwine yomibili imidlalo, bayifaka emaqenjini ayisishiyagalombili aphezulu iChiefs. Lokhu kusho ukuthi isizodlala kwiMTN8 la izobhekana khona neMamelodi Sundowns emdlalweni wayo wokuqala kwisizini entsha.
“Ngifunde lukhulu kuye (uHunt). Kube yishwa nje ukuthi izinto azihlangananga… okunye ke sekuwumlando. Singakhuluma thina kuze kushe amazwi kodwa ekugcineni isinqumo sathathwa ngabaphathi beqembu. Singabaqeqeshi, siyafika sibuye sihambe,” kusho kanje umfo kaMangethe.
Njengoba namanje iqembu lingakacacisi ngozothatha lesi sikhundla ngokuphelele, uZwane kungenzeka aphelelwe yindawo uma umqeqeshi omusha eqoka ukuzifunela amaphini akhe.
Lokhu akumphathi kabi uZwane njengoba ethi yena uvele uqashwe njengomqeqeshi wenkulisa. Wenza omuhle ke futhi umsebenzi njengoba esekhiqize abadlali ababukeka bebahle futhi benekusasa kuMakhosi.
“Ngingumuntu othatha unyawo ngalunye alubeke phambi kolunye. Ngikholwa wukuthi ngisengumfundo kulo mdlalo. Ukuthi ngizoba yingxenye noma ngeke yethimba elizopheka iqembu ngesizini ezayo angazi.
“Kodwa ngizobe ngisekhona kwiKaizer Chiefs ngoba ngingumqeqeshi wenkulisa. Uma unikwe ithuba, uyalisebenzisa ngokuzinikela,” kusho uZwane.
“Uma kungalungi, uqhubekela phambili. Kodwa lokhu kube yingxenye yokufunda kimi noDillon. Ukunikwa leli thuba lokusa iqembu phambili… siqoqe amaphuzu agcwele kuyo yomibili imidlalo.
“Yini elandelayo? Noma ngabe kwenzakalani, lokho kuzosiza iqembu ngoba kuzokwenziwa ukuqinisekisa ukuthi iqembu liyathuthuka liba ngcono futhi libuyela la lifanelwe ukuba khona.
“Kuzobe kungekhona ukuthi yingoba usibanibani akakulungele ukwenzani. Kuzoba yingoba mhlawumbe abaphathi bakholwa wukuthi ithimba abaliqokayo – esizoleseka ngayo yonke indlela – lizokwenza okungcono,” kuchaza uZwane.
Previous Previous post: UMosimane uhamba nje ubesevele engaseneme kwiSundowns
Next Next post: Ubonge ithimba nabadlali uMcCarthy obengezwakali eneme ngokuwina kwakhe indondo